पोखरामा बीपी शतवार्षिकी कार्यक्रम – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पोखरामा बीपी शतवार्षिकी कार्यक्रम
२०७१ जेष्ठ १०, शनिबार ०२:१६ गते
नेपाली साहित्याकाशमा युगौँसम्म चम्किला तारा बन्न सफल मानक सर्जकहरु धेरै छन् । सबैको नाम लिन सम्भव छैन । यो साल बीपी शतवार्षिकी । सान्दाजुको बारेमा मैले धेरै सुनेको छु, पढेको छु । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्ना रचना सुनाउने सौभाग्य जु¥यो । सान्दाजु मेरा लागि एक मिथकीय पात्र । उहाँका बारेमा यसो–उसो भन्ने हैसियत म राख्दिनँ । यत्ति भन्छु, देशले खोजेको नेता बीपी र मदन भण्डारी हुन् । राजा महेन्द्रलाई पनि हृदयले मान्दछु ।
गएँ म दाङ । यसपालि साइत जु¥यो पोखराको । कार्यक्रम चैत २८ र २९ । दाजु गोविन्दराज भट्टराईले ‘भाइ पोखरा’ भन्न गाह्रो मान्नुभयो । उहाँलाई बुहारीको समस्या थाहा छ । तर, घुमाएर हाम्रो चितवने पाका सर्जक केदारनाथ खनालज्यूलाई भन्नुभएछ, ‘गोपी पनि है’ । २७ गते राति यी सेता हिमालले मलाई दूरभासमा ‘लौ भोलि बिहानै ६ बजे मकहाँ चिया पिउने गरी आइपुग्ने….’ हार्दिक निमन्त्रणा भने । शुक्रबार बिदा लिएँ । गुरूको आज्ञानुसार सीताजीलाई मनाएर हिँडे बिहानै । अर्का भलामानुष मणि काफ्ले । ठीक सवा सातमा हाम्रो यात्रारम्भ भयो । अब क–कसको धज्जी उडाइन्छ ? मनमा यही त्रास । बाटो काट्न कुरा गर्नुपर्दछ । कुरा जस्तो पनि हुन सक्छ । सकेसम्म अनुपस्थित पात्रका बारेमा दायाँबायाँ भन्न नपरे मेरो मन रमाउँछ । त्यसो भनेर धज्जी उडाउने कुरा उद्योगमा भागै लिन्नँ भन्न खोजेको होइन ।
म पनि औसत मान्छे नै हुँ । यत्ति हो, कुरा काट्नभन्दा हिन्दी गीत गाउन मन लाग्छ । हिन्दी गीत गाएर पनि बाटो काटिन्छ । सुन्ने कानहरु अनुकूल हुनुपर्दछ । तर, हामी तीन जनाले कसैको पनि कुरा काटेनौँ । चितवन हिरो २०७० ले अलि–अलि तरङ्ग उत्पन्न गराएको थियो, त्यतातिर पनि ध्यान दिइएन । मणि काफ्ले गुरूसित यो पहिलो साहित्यिक गफ सुरू भयो । रामदेव, वामदेव र कामदेवको चर्चा भयो । गिरीजी, यो मान्छेको जात कपडा लगाएको जनावर हो– मणिजीको अनुभव । मैले पनि धेरै हदसम्म मान्छेभन्दा जनावरलाई, चौपायालाई बढी अनुशासित र मर्यादित पाएको छु । धेरै मान्छेको संगत गर्ने मभन्दा भैँसीको मात्रै बढी गर्ने मेरी जीवनसंगिनी सीताजी बढी सुखी र खुसी भएझैँ लाग्दछ । प्रमाण छ, हामी बूढाबूढी ठीक ९ बजे राति निद्रादेवीको शरणमा गयौँ भने उनी १५ मिनेटमै घुर्न थाल्छिन्, मलाई निद्रा लाग्न अर्को ४५ मिनेट लाग्छ । म उनीभन्दा अनेक प्रकारले दुःखी छु, तर प्रकट गर्दिनँ । गजलमा व्यक्त गर्दछु ।
एउटा ज्यादै घतलाग्दो कुरा भन्नुभयो मणि सरले । कुरा लोकतन्त्रवादी नेता रामकृष्ण घिमिरेज्यूको अनुभवको हो । भारतमा सान्दाजु बनारसमा बस्दा घिमिरे बन्धु सान्दाजु भेट्न जानुभएछ । अरु पनि थिए । सँगै भान्सा । खाना खाएको थाल छोडेर चुठ्न उठे घिमिरेजी । तर, त्यहाँ आफ्नो थाल आफैँ माझौँ अभियान रहेछ । सान्दाजुले केही पनि नभनी रामकृष्णजीको थाल र आफ्नो थाल सफा गर्नुभएछ । वाह रे सादगी ! यस्तो पो सरलपन ! यही एउटा घटनाले हाम्रा रामकृष्ण घिमिरेज्यूले आजीवन चारतारे झन्डा ओढेर जय नेपाल मन्त्र जप्ने कसम खानुभएछ । के आजका नेताजीहरुमा त्यो सरलपन पाइएला ? त्यसपछि हामीले मानवजीवनमा हुने यौनाचरणका बारेमा चिरफार ग¥यौँ । यो मानवजीवनको गोप्यशाखा हो । भद्र, शालीन र सभ्य यौनजीवन नै भव्य हुन्छ । लय नमिलेमा प्रलय ! केदार गुरूबाले पनि बीचबीचमा हामीलाई साथ दिनुभयो । पूरै मार्केट मणि गुरूलाई ।
लगभग ११ बजे पुगियो ठाउँमा । साहित्यिक हिसाबले यो मेरो पहिलो पोखरा यात्रा थियो । पोखरेली मित्रहरुको अनुहार आँखाभरि आए । प्रगतिशील नआउने हुन् कि ? मनमा शंका । आफूलाई मतलब छैन, जता पनि गइन्छ । पहिलो काम माम । मान्यवरहरुलाई सलाम । कोठा नम्बर ११ मा हामी समायोजित । वियोगी बुढाथोकी यो योगी देखेपछि प्रफुल्ल । सुकरात गुरू र अलिखित । नेपाली लेखक संघका प्रतिनिधिहरु । मित्र कुसुमाकर न्यौपानेको सपना पोखरामा भव्य कार्यक्रम गर्ने । ३० वटा कार्यपत्र ! हामी अलपत्र । नो टिप्पणी । योचाहिँ राम्रो लाग्यो । दिनभरि असल स्रोता बनियो । कलानिधि दाहाल र कुलप्रसाद कोइराला, नयाँ अक्षयकोष ! कुस्मा, पर्वतबाट बैनी सरस्वती जिज्ञासु । महिला सहभागिता पनि राम्रो । कार्यपत्र अंग्रेजीमा पनि । सान्दाजुलाई आयामिक रुपमै उत्खनन् गरियो । राजा महेन्द्रलाई स्याबास भनियो । उनले बीपीलाई सुन्दरीजल नपठाएको भए नेपाली साहित्य यति धनी हुन पाउने थिएन । यौन मनोविज्ञानलाई यति कलात्मक रुपमा व्यक्त गर्ने नेपाली सर्जक सान्दाजु नै हुन् । फ्रायडको सिद्धान्तलाई पागलको प्रलाप भनिए पनि यो संसार यौनदासहरुकै संसार हो । यौन चाहना कुनै सामाजिक अपराध होइन– प्रकृतिको सुन्दर कविता हो, वरदान हो । यो एउटा सहजवृत्ति हो । सान्दाजुको साहसलाई सलाम !
तर, हामी मध्यमवर्गीय चरित्र बोक्नेहरु सामाजिक रुपमा पुष्कर लोहनी र राजेन्द्र थापा एवम् सीता पाण्डेहरुलाई बहिष्कार गरेको अभिनय गर्दछौँ, तर भित्रभित्र ? मान्छे जे देखिन्छ, त्यति मात्र होइन । मन, बचन र कर्मले अनुरुप जीवन ज्यून सक्दैन मान्छे । कपडाले शरीर ढाकेझैँ अनेक कुरा ढाक्न, लुकाउन विवश छ मान्छे । यही कुरा गुन्जियो, २८ गते पोखरामा । कुसुमाकरको कलात्मक उद्घोषण, आफ्नो ठाउँमा । दाजु सरुभक्तको उपस्थिति, एउटा चुली । यस्तो लाग्यो, पूरै पोखरा त्यहीँ छ । म पागल, जीवनमा पहिलोचोटि पागल बस्तीमा । तीर्थ श्रेष्ठको उपस्थिति भयो । केही प्राविधिक…..!
केदार गुरूले २९ गते बिहान सुनाउन सान्दाजुमाथि अुनुष्टुप छन्दमा एउटा खण्डकाव्य नै तयार गर्नुभयो । साक्षी बनेँ म । आयो २९ गते । ८ बजे भनेकोमा ९ बजे कार्यक्रम सुरू भयो । पोखरामा छन्दभन्दा गद्य कविता नै बेजोड । आयो पालो । गर्जिएँ– कसैको यादमा तड्पी बसेको आज धेरै भो… भनेँ, रामबाबु शैलीमा गजलको कारणले मेरो होइन, मेरो कारणले गजलको बद्नाम हुनेभयो । केही मित्रहरुले मेरो गजल गायन मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुभयो । माहौल तातेझैँ लाग्यो । जीवन रेग्मी, २७ वर्षपछि गुरू–शिष्यको भेट । पहिले चिनिनँ । उसैले परिचय नवीकरण ग¥यो । सुखद र सार्थक यात्रा सुसम्पन्न गरी ठीक १०ः३० बजे पोखरालाई बाई–बाई भनियो । ‘चुली’ सरुभक्त दाजुको माया लाज नमानीकन लिएँ । रीता कँडेल र हीरादेवी शर्मा नानीहरुलाई ‘सँगी’ थमाएँ । पोखरेली बन्धुहरुको न्यानो माया मुटुभरि साँचेर फर्किएँ ।
एउटा सार्थक भ्रमण सम्पन्न भयो । बीपी सबैका साझा सर्जक हुन्– सरुभक्त दाजुको भनाइ कानमा गुन्जिरह्यो । मित्र नेत्र एटमको प्रतिक्रिया पनि सम्झिएँ । मेरो हृदयले पनि भन्यो– सर्जक विश्वसम्पदा हो । यतिखेर नेपाली लेखक संघले सान्दाजुको शतवार्षिकी मनाउने क्रममा अधिराज्यभरि कार्यक्रम गर्ने दायित्व आफ्नो काँधमा लिएको भए तापनि साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सिंगो नेपाली साहित्यका निधि हुन् । राजनेता हुन् । सबैका साझा सान्दाजु हुन् । अति देवत्वकरण गरिएमा उनीमाथि अन्याय हुन सक्दछ । उनी पनि एउटा सामान्य मानिस हुन् । यो दुनियाँमा सबै सामान्य हुन् । मान्छेको कर्म नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । हामी फगत् नेपाली, हाम्रो रगत नेपाली ।